BOLIVIAN BEGONIA: SHARAXAADDA SAWIRRADA KALA DUWAN EE COPACABANA IYO SANTA CRUZ, SHUCUURTA BEERITAANKA IYO BEERASHADA LAGA BILAABO ABUURKA XAYAWAANKA DHASHA, IYO SIDOO KALE CUDURADA IYO CAYAYAANKA - GURI, GURI
Dhammaan ku saabsan Bolivian Begonia: sifooyinka beeritaanka iyo sii kordhaya ubax guriga iyo goobta
Begonias waa quruxda ugu wanaagsan ee daaqadaha daaqadaha iyo balakoonnada. Qoyska Begonia waxay leeyihiin wax ka badan hal iyo badh kun oo noocyo kala duwan. Bolivian Begonia waa wakiil xiiso leh oo wakiil ka ah qoyska. Dhirta ubax leh ee dhirta u qalantaa waxay u qalantaa meel ka mid ah ururinta lover flora qolka. Maqaalkani, waxaynu baranaynaa sharaxaadda iyo taariikhda dhalashada Bolivia, noocyada kala duwan iyo geedi socodka, shuruudaha hawada iyo daryeelka, cayayaanka ugu caansan ee begonia iyo talooyinka cayayaanka, iyo sidoo kale kordhinta miraha.
Dhirta Begonia waxay ka tirsan tahay ubax, dhirta dicotyledous. Herb, geedo, geed, sanado badan, sanadlaha - dhammaan noocyada kala duwan ee begonias. Begonias waxay ku tarmi doonaan caleemo iyo digriiga, iyo gooynta iyo abuurka ee u bislaaday miro-sanduuq. Si aad u ogaatid sida loo kiciyo dhalashada tuberiyo by gooyn, akhri maqaashayada.
Dalkan gawaarida duurjoogta ah - kaymaha roobabka kulaylaha ee buuraha Afrika, Koonfur Bari Asia iyo Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika. Socotadu waxay dhirta dhirta u soo saareen Yurub ilaa qarnigii siddeed iyo tobnaad. Begonias ayaa si dhakhso ah u badisay jacaylka dadka soo iibsada.
Liiska liiska cusbitaallada sii kordhaya ee daaqadaha Yurub ayaa la cusbooneysiiyey noocyada iyo noocyada cusub. Dhirta ahaayeen ma aha oo kaliya muuqaal ah muuqaalka, laakiin sidoo kale aan qabyo ahayn. Cudurka Bolivian Bolivian wuxuu ku baxaa duurjoogta barafka ee bariga Andes. Tani waa sanadle ah tuberous. Waxay leedahay muuqaal xarrago leh: caleemaha elongated leh caleemo qulqulaya. Inta lagu jiro ubax, waxay jecel yihiin isha leh biyaha oo dhan oo ubaxyo, dhalaalaya, ubax, soo ururiyey inflorescences yar.
Noocyada ugu caansan ee bilowga Bolivian hybrid - "Copacabana" iyo "Santa Cruz". Labadaba waxay ku dhuftaan abuurka, waxay koraan dhererka ilaa 30-35 sentimitir. Markaas waxaa jira koritaanka firfircoon ee caleemaha. Taas waxaa sabab u ah dhalashada gabadhan yar ama qaab bakeeriga ah waa la nadiifiyay (waxaad ka baran kartaa geedka caleemo abuurka ah iyo sida loo koro halkan, halkaanna waxaan u sheegnay sida loo beero dhirta ornamental iyo daryeelka ee guriga iyo berrinka bannaan). Hoos waxaa ku qoran sharaxaada noocyada kala duwan ee sawirada.
Blossoms ee taallo jilicsan ee ubaxyada casaan. Waxaa loo dhigaa geedka oo u adkeysanaya cimilada roobka iyo roobabka, iyo sidoo kale si toos ah qoraxda.
Inta lagu jiro ubax waxay ku tiirsan yihiin cascades ubax ah oo ku yaalla tanga-cas cas. Sidoo kale aan qabin xaaladaha, sida copacabana. Waxay si fiican u kori kartaa oo u xoqin kartaa labadaba qayb ahaan iyo qorraxda ku filan.
Xagee iyo sida loo beero?
Bilowga Bolivian waa warshad caalami ah. Bolivian waxay ku haboon tahay ubaxyada dibadda, beerta balbaloyinka, iyo daaqadaha guriga (oo ku saabsan sida loo abuuro curonia tuberous, iyo qawaaniinta aasaasiga ah ee daryeesha, waxaad ka heli kartaa halkan). Hoos u dhaca guriga iyo berrinka bannaan. Sariiraha ubaxa iyo xayawaanka alpine ayaa badanaa loo doortaa si curonia loo dabooli karo dhammaanba goobada wareegga leh caleemaha (dhererkoodu waa ilaa 80 cm). Geedka ubaxyada leh ee begonias iyo dheryaha ayaa la geyn karaa labada derbi ee guriga, iyo balakoonka, veranda ama barxadda guriga.
Bilowga Bolivian waa ubax aad u fudud. Laakiin qorraxda qorraxda badan ayaa gubi karta caleemaha. Waxaa haboon in la dhigo curonia marka qorraxdu si toos ah u dhici doonto. Sidoo kale waa suurad wacan si loo ilaaliyo dhirta laga yaabo in gustska suurtogalka ah ee dabayl xoog leh: waxay dhaawici kartaa caleemaha.
Dukaammada dhirta ayaa iibiya meel gaar ah oo loogu talagalay begonias. Qalabaynta gudaha iyo balakoonka, waa mid qumman. Waa wax sahlan oo diyaarinta ciidda adigaa. Noocyada tuberoonka ah, isku darka soo socda waa mid wanaagsan: laba qaybood oo ah dhul caleen ah oo ka soo baxa geedo waaweyn oo qallafsan - hal qayb oo ka mid ah ciidda webiga - hal qayb oo sod leh.
Haddii begonias dhulka dhulka ku furan, sariirta ubax, ka dibna doorashada ugu fiican ee warshadu waa nafaqo, ciid dabacsan. Haddii dhulka uusan ku filnayn dabacsanaan - waxaad ku dari kartaa ciid, dhadhan leh humus caleen, peat. Carrabku waa inuu noqdaa mid cirrid ah.
Bilowga Bolivian - warshad aan qabin. Xasuuso xeerar dhowr ah si aad u daryeesho, iyada oo dareensan in ay weyn tahay.
Dheriga ubaxa wuxuu noqon karaa wax kasta (maaha doorka dhirta tuberous). Waxa kaliya oo muhiim ah in la doorto karti aan lahayn qoto dheer, laakiin waa ballaaran.
Waraabinta waxaa lagu sameeyaa biyo heerkulka qolka (biyo aad u qabow - ma haboon!). Waxaad biyo ku dari kartaa laba ama saddex jeer toddobaadkii. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in biyaha aysan ku dhicin caleemaha. Markuu ilmuhu bararayo, waxaad marar badan biyo ka qaadi kartaa. Ha "buuxin" ubaxa, waa wax qabad leh. Waa inay jirtaa dufanka wanaagsan ee dheriga.
Fadlan ogow: cimilada kulul iyo qallalan, begonias waxay u baahan tahay in la sii qoyaan. Waxaa lagula talinayaa in ay qaaddo buufinta. Waa in aan lagu rusheynin caleemaha, waxay u fiicantahay in ay qoyaan hawada ku wareegsan dhirta leh dhalada buufin.
Si aad u kicin dhirta ubaxyada iyo dhirta sii dheeraaday ayaa la quudin karaa. Waa ku filan in la sameeyo bacriminta macdanta hal mar bishii.
Inkasta oo bilowga Bolivia waxaa lagu magacaabaa noocyo adkaysi u leh qorraxda si toos ah, weli way ka fiican tahay in laga dhigo qorraxda dhalaalaysa. Iftiinkani waa inuu noqdaa mid ku filan. Mararka qaarkood waxay u fiicantahay in ay yareeyaan dhirta.
Waxaad ka heli kartaa shuruucda daryeelka caafimaad ee tuberonka, iyo sidoo kale dareenka lagu beeri karo guriga iyo berrinka bannaan, iyo halkan waxaan ku qornay sida loo daryeelo geedka jiilaalka.
Qoyaan xad dhaafka ah ee begonias waa burbur.
Haddii dheriga uu yahay mid joogto ah oo qoyaan ah - dhirta ayaa laga yaabaa in qudhmi, ay afkoda iyo caleemaha bilaabi doonaa inay noqdaan madow. Waxaa lagama maarmaan ah sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagal ah in laga saaro dhammaan qaybaha madow, geedi-socodka ah oo leh astaamaha antifungal - fungicide. Waxaa ugu wanaagsan in lakabka sare ee carrada lagu beddelo mid cusub oo qalalan.
Fungi ayaa laga yaabaa inay ka muuqato ciidda biyaha.
Kuwa ugu caansan waa kalluun quraaradda. Waxay muujinaysaa sida ubaxyada cawska ee caleemaha iyo xuubka on burooyinkeeda.
Nidaamka Dhibaatada: Ku buufinta cusbada leh xal of naxaas sulfate iyo saabuunta dharka lagu dhaqo (hal litir oo biyo ah waxaanu isku daraa laba garaam oo fitamiin iyo labaatan garaam oo saabuun).
Muuqaalka muuqaalka kalluunka budada ah wuxuu sidoo kale la xiriiraa xad-dhaaf ah qoyaan. Caleemaha waxaa lagu daboolay dhar cadaan ah.
Caawimaad! Qalabka "first aid" ee laga bilaabo xagta ujuurada budada ah: samee saabuunta dharka lagu dhaqdo iyo si tartiib ah u tirtir caleemaha.
Haddii burooyinku ay hoos u dhacaan, tani waa caddaynta dhirta dhirta iyo / ama hawo qallalan.
Ficiladu waa cad: hoos u dhig biyaha iyo faleebo marar badan.
Haddii caleemaha qallalaan oo huruud isu beddela, labada ikhtiyaar ayaa suurtagal ah.
Ama begonia waa "daadad" ama, lid ku ah, dhulka aad u qalalan. Waxaa looga baahan yahay in lagu saxo xaaladda si fiican. Waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay quudinta begonia: nafaqooyin ku filan koritaan iyo ubax.
Cabbitaan kasta oo caleemo ah? Waqtiga si aad u diyaariso dhirta ama u dhaqaajiso xayawaanka daaqada yar.
Ku saabsan sababta dhalashada tuberoonta aan ubaxin iyo waxa la sameeyo, iyo sidoo kale ku saabsan cudurrada, cayayaanka iyo siyaabaha looga hortagayo, halkan ka akhri.
Bilowga Bolivian - ubax sanadle ah. Waxaa la koray abuur, geedo waxaa lagu beeray dhulka furan.
Seeds lagu beeray dabayaaqadii jiilaalka - horraanta gu'ga.
Seeds (ee granules) ayaa la dhigaa dusha sare ee ciidda dabacsan ee qoyan. Waxaad ku dhejin kartaa xitaa lakab ciid ah oo calcined on dusha sare ee ciidda iyo granules saaro on.
Nadiifi shinni si joogto ah leh buufin si looga hortago qalajinta.
Si aad u caleemo u hesho, waxaad u baahan tahay inaad abuurto "mini-greenhouse" - iyaga ku dabool wax yar oo shukumaan ah (dhalada, filim caag ah, caag ah) kuna rid meel kulul oo wanaagsan. Maalinlaha furan "kuleylka" waqti gaaban, ku buufin abuurka sida loo baahdo.
13-15 maalmood ka dib waxaad filan kartaa soo bixitaanka caleemaha. Xayawaanku waa inay ahaadaan heerkul aan ka yareyn +20 Celsius.
Geedo ayaa lagula talinayaa in lagu bedelo ka dib muuqaalka waraaqaha. Geedo ayaa la geliyaa wargeysyada leh ciidda 3 cm qoto dheer, heerkulka waa in la yareeyo 2-4 digrii.
Goobo geedo ayaa loo baahan yahay in mar labaad la isu tallaalo: taangiga oo ku saabsan sagaal sintimitir qoto dheer (hoos u dhig heerkulka ilaa 15 darajo Celsius).
Maalinta iftiin ee geedaha ugu fiican adoo adeegsanaya nalalka gaarka ah.
Goobta furan, geedo waa "dib u dejin" ka dib markii kuleylka xasilooni yimaado oo aysan jirin khatarta ah in si degdeg ah loo dhigo. Waxaad kaloo ka qaadi kartaa dhirta dufanka leh balakoonka ama barxadda.
Bolivian Begonia - warshad wax ku ool ah oo fudud. Marka la raaco tilmaamo sahlan, waxaad ku kori kartaa guriga ama goobta iyo quruxda quruxda oo dhan xagaaga.